musha nyika dzakabatana Singers Wiz Khalifa Nyaya Dzebhudhi Nechepamwe Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican Rapper nezita rezita “Queer mudiki". Yedu Wiz Khalifa Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanotungamira rap maartist. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Wiz Khalifa's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Wiz Khalifa Upenyu Hwepfuura uye Background Yemhuri:
Kutanga kubva, Cameron Jibril Thomaz akaberekwa pazuva re8th raSeptember 1987 kuMainot kuNorth Dakota, US Iye aive wechipiri pavana vaviri akazvarwa mubatanidzwa pakati paamai vake, Peachie Wimbush-Polk nababa vake, Laurence Thomaz.
Nyika yeAmerica yerudzi rwevatema nemidzi yeAfro-America yaive nehupenyu hwepasi rose hunotyisa nekuda kwekuita kwababa vake muchiuto cheUS. Nekuda kweizvozvo, aigara muJapan, United Kingdom neGerman.
Panguva iyo Khalifa mudiki aive akura 3, vabereki vake vakarambana, chiitiko chakazoona amai vake vachigara kuPittsburgh muPennsylvania, USA apo Khalifa anga atove zera 9. Kwaive kuPittsburg uko Khalifa akarerwa naamai vake pamwe nemukoma wake mukuru Dorien 'Lala' Thomaz. Pasina nguva vagadzikana, Khalifa - uyo akange aona rudo rwake rwekuimba mimhanzi achiri mudiki - akatanga kunyora mazwi enziyo dzaaitarisira kureketa munguva inotevera.
Wiz Khalifa Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Wiz Khalifa akadzidza paTaylor Allderdice High Chikoro muPittsburgh. Ndichiri pachikoro icho chine chete marekodhi anowanikwa enhoroondo yake yekudzidzira, Khalifa akafambira mberi kubva pakunyora mazwi kuenda kunzira dzekurekodha.
Khalifa paakange ave nemakore gumi nemashanu muna15 akatanga kufarira zvekurekodha mimhanzi zvekuti manejimendi eiyo studio - ID Labs - kwaakanyora akamupa mahara emahara-epamusoro-studio nguva nekuda kwekushingairira kwake uye nemhando yemazwi aakanyora.
Wiz Khalifa Kurarama Kwepakutanga Hupenyu:
Asides anotakura ega zvinyorwa, Khalifa akawana simba nekupa mixtape yeaipartart artists muPittsburgh. Nekuda kwesimba rakadai, Khalifa akakwezvwa nemutungamiriri weRostrum Records Benjy Grinberg uyo akasaina tarenda rekuvandudza rekodhi rake mu2005.
Mwedzi yakati mushure mekusainirwa kuRostrum Records, Khalifa akaburitsa mixtape yake yekutanga, "Muchinda weGuta: Tinogamuchirwa kuPistolvania" (2005) ndokuenderera mberi nekuburitsa dambarefu rake rekutanga rakazara "Ratidza uye Ratidza" (2006). Kunyangwe iyo yekutanga dambarefu isina kubudirira, aive zvakadaro akanzi "muimbi wekutarisa" naRolling Stone Magazine gore iro.
Wiz Khalifa Road To Fame Nyaya:
Achifambira mberi, Khalifa akasainwa kuWarner Bros Records mu2007 asi akaburitsa mixtapes miviri "Kukura Mwaka" uye "Muchinda weGuta 2" kuburikidza neyaimbove zita rake - Rostrum Records. Akazopedzisira aita rake rekutanga Warner Bros asina kuroorwa "Say Yeah" akagamuchira redhiyo redhorobha airplay uye akaratidzwa paRhythmic Top 40 uye Hot Rap Amaculo machati muna 2008. Pasina nguva Khalifa aburitsa mixtapes "Star Power" uye "Ndege Chikoro" neRostrum. Zvinyorwa.
Achida kukwira pakubudirira kudiki kwaiperekedza "Iti Ehe", Khalifa akaisa mari yakawanda mukuona kuburitswa kwealbum yake yekutanga yeWarner Bros. Zvisinei, chinyorwa chakachengetedza Khalifa mukumira nekunonoka kuburitswa. Akashungurudzika uye akasuruvara, Khalifa akaonekana naWarner Bros uye akatarisira kuve mukutonga kwekufamba kwake kwaitevera.
Wiz Khalifa Rise To Fame Nhau:
Mukufamba kunononoka asi kuverengerwa, Khalifa akaenderera mberi nekuwadzana neRostrum Records uye akaburitsa imwe chete, 'Dzidzisa U kuenda Fly' pamwe neiyo mixtape 'How Fly' asati asaina kuAtlantic Records muna Chikunguru 2010. Khalifa's single single for Atlantic "Dema uye Yera" yakazomuunzira budiriro sezvo yakakwira panhamba yekutanga paBillboard Hot 100.
Nekukurumidza kumberi kusvika nhasi Wiz Khalifa muimbi anobudirira anozivikanwa neake chart-topping hits "Shanda Zvakaoma, Tamba Zvakaoma" (2012) uye "Tokuonai zvakare" (2015) aine yake yazvino (panguva yekunyora) uye yechinomwe studio studio kuve "Rolling Mapepa 7" (2). Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Wiz Khalifa Hukama Hupenyu Chokwadi:
Khalifa anoverengeka pakati pevazhinji rap artists vaimbove vakaroora. Tarisa uone chokwadi chehukama hwehukama hwake, husina kubudirira muchato uye zvazvino hukama hwehukama. Kutanga pahupenyu hwerudo rweKhalifa musati maroora, Rapper anozivikanwa kunge akambodanana neAmerican Reality TV Contestants Draya Michele naNatalie Nunn vasati vasangana nerudo rwake rwakava mudzimai - Amber Rose.
Amber Rose naCalifa vakatanga kufambidzana mu2011 uye vakaita hukama hwavo paruzhinji nekuwoneka mumagazini yeFADER yakapararira. Ivo vakaenderera mberi nekuroora pane 8th yaJuly 2013, chiitiko chakauya mwedzi mina chete mushure mekuzvarwa kwemwanakomana wavo Sebastian. Iwo ex-vakaroora vanoita sevakakwana kune mumwe nemumwe vakaparadzaniswa pa22nd yaSeptember 2014 uye vakarambana pa7th yeJun 2016 naAmber achitaura nyaya isingawirirane.
Kutevera kukundikana kwemuchato wake naAmber, Khalifa akambodanana nemadzimai asiri pasi pevatanhatu anosanganisira María Becerra uye Brazillian Model Izabela Guedes asati asangana nemusikana wake wazvino neCanada Model - Winnie Harlow. Ivo vaviri vakatanga kufambidzana kubva muna Chikumi 6 vanoramba vachishandira zvibodzwa zvehukama zvinoratidza kuti rudo runopfuura zvinopfuura zvepanyama.
Wiz Khalifa Hupenyu Hwemhuri:
Khalifa ane yepakati-yemhuri mhuri uye hwakasarudzika kubva kune dzakawanda ethnoreligious antecedents. Nhoroondo dzehupenyu hwake hwemhuri dzinopihwa pazasi.
Nezve baba vaWiz Khalifa:
Laurence Thomaz ndibaba vaKhalifa. Akashanda mubasa remauto eUS panguva yehupenyu hwaKalifa achiri mudiki uye akarambana naamai vemurapi apo aingova nemakore matatu chete. Nekudaro, kupatsanurwa hakuna kuudza hukama hwaLaurence baba-mwanakomana naKhalifa sezvo aigara achitaurirana narapper uye aitsigira zviroto zvake.
Nezve amai vaWiz Khalifa:
Peachie Wimbush-Polk ndiamai vaKhalifa. Iye zvine nharo mumwe wevadhiropu vanhu kumoyo waKhalifa sechisungo chepedyo chaanogovana naye chakatanga kubva pamazuva ake ekuzvarwa kusvika zvino. Zvinoita pasina kutaura kuti Peachie anopeta semhepo huru kuna Khalifa uye haambomurega achirasikirwa nekutarisirwa kwevabereki.
Nezve hama dzaWiz Khalifa:
Khalifa ane vanin'ina vaviri vanozivikanwa. Ivo vanosanganisira mukoma wake wekubereka mukoma akashandura mukadzi - Dorien 'Lala' Thomaz pamwe nehafu yababa vake-hanzvadzi Lauren Thomaz. Dorien 'Lala' Thomaz akakurira naKhalifa achiri mukomana asati ave transgender gare gare muhupenyu. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zvishoma zvaizivikanwa nezve kuvapo kwaDorien kusvika pakufa kwake kusingatarisirwe mu2017 mushure mekurwara nechirwere chisingazivikanwe. Zvichakadaro, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvehafu yababa vaKhalifa hanzvadzi-hanzvadzi Lauren Thomaz panguva yekunyora.
Kufambira mberi kubva kumhuri yepedyo yaKhalifa, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake sekuru vake nasekuru nasekuru pamwe nasekuru vake nasekuru. Iko hakuna marekodhi evana bababamunini vaKalifa uye vazukuru nepo hama yake chete inozivikanwa Taylor Gang isina kuzivikanwa mune zviitiko zvine mukurumbira zveupenyu hwaKalifa hwepakutanga kusvika zvino.
Taura nezvehunhu hwaKhalifa, anosanganisa hunhu uye hunhu hunhu hweVirgo Traits neanoseka munhu. Pamusoro pezvo, akangwara, anoshanda nesimba uye aisada kubiridzira pakukurukura nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Nezve maitiro ayo rapper anoshandisa kwazvo kubva pane rake mugove we24 maawa pazuva, anotora zviitiko zvishoma zvaanoona sekufarira kwake uye zvekunakidzwa nazvo. Izvi zvinosanganisira kufamba, kuona mafirimu, kuteerera mimhanzi, kutamba zvikamu uye kupedza nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Wiz Khalifa Mararamiro:
Achienderera mberi nekuita kwakaita Khalifa mari yake pamwe nemaitiro ake emashandisiro, rapper ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora makumi mana nemashanu. Icho chizere ruzivo kuti chikamu chakakura chepfuma yaKhalifa chinotora kwayakabva kune kwake mimhanzi kuedza. Chero chipi chinoshayikwa naKhalifa mumimhanzi mari inoitirwa muzvibvumirano zvake uye mari dzekudyara izvo pamwe chete zvinoita kuti azive mamirioni emadhora pagore.
Nekudaro, zviri pasina kutya uye kufarira kuti Khalifa anayo uye anochengetedza imba yemhando yepamusoro uye yakagadziridzwa muCanononsburg. Iyo 3,891 sq ft pekugara iyo inogara pane 2.8 ane matanda maeka anozvirumbidza ezvimiro senge hombe imba yekugara, yekufungidzira kicheni uye tenzi yekurara. Iyo Mansion zvakare ine garaji rinoshanda semumvuri unodzivirira weKalifa's exotic mota muunganidzwa iyo inoratidza kutasva senge Dodge Challenger SRT 8, pakati pezvimwe zvigadzirwa zvemotokari.
Wiz Khalifa Untold Chokwadi:
Kuputira nyaya yedu yeWiz Khalifa yehucheche uye biography pazasi zvinhu zvisingazivikanwe zvakare zvinonzi zvisinga zivikanwe izvo zvinosiya pasina matombo asina kutaurwa mukuda kwedu kukubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara wake.
Wiz Khalifa anoda kunwa uye kuputa. Rapper uyu anoita kunge haapatsanwe nekusvuta kuti akashandisa madhora zviuru gumi pamwedzi pagirnab pamberi peKuki Kuki - mutengesi wembanje wekurapa uyo anotengesa dambudziko rake re "Khalifa Kush" (KK) - akamubvisa pamitengo nekutsigira kuputa kwake.
Runyanzvi rwekutanga rwemuimbi rwanga rwuri tattoo yezita rake rezita "Wiz Khalifa" paaive nemakore 17-makore. Nekukurumidza kumberi kusvika parizvino, ane akawanda matattoos kuti anyatso kuongororwa.
Chitendero chaKhalifa hachizivikanwe panguva yekunyora. Kunyanya zvakadaro, ane mazita echiKristu uye echiMuslim nekuda kwekuti aive nasekuru vechiMuslim vakamutumidza kuti Khalifa. Sezvineiwo, Khalifa izita reArabic rinoreva huchenjeri. Kutora mavara matatu ekutanga "Wis" kubva mududziro yeChirungu, Khalifa akaumba "Wiz" kuti awane zita remudariro "Wiz Khalifa".
Thanks for reading vedu Wiz Khalifa Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!